June 1, 2021 - ApannPyay Media
June 1, 2021 by ApannPyay Media
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို လုံးဝ ထည့်မထားသင့်တဲ့ အရာတွေနဲ့ လာဘ်မပိတ်အောင် သတိပြုရမယ့် အချက် (4) ချက် သင့်ရဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမကောင်းဟာ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်မလား။ တချို့ကိစ္စတွေက ယုံဖို့ခက်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အကျိူးသက်ရောက်မှုရှိနေတတ်တာကိုတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်နဲ့လုပ်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဘောက်ချာအတိုအစတွေပိုက်ဆံအိတ်ထဲမထည့်ထားပါနဲ့ ဈေးဝယ်ပြီးနောက်ရလာတဲ့ဘောက်ချာတွေ၊ ဖြတ်ပိုင်းအတိုအစတွေ၊ စာရွက်ခေါက်တွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်သိမ်းထားတာမျိုးက လာဘ်တိတ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒါတွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်မထားမိဖို့ သတိပြုပါ။ သေချာရှင်းလင်းပါ။ (၂) ပိုက်ဆံတွေကိုစနစ်တကျစီထည့်ပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲပိုက်ဆံတွေထည့်တဲ့အခါ လုံးထွေးပြီးထည့်ထားတာမျိုး၊ တွန့်ကြေနေတာမျိုးတွေမဖြစ်စေပါနဲ့။ ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားပြီး အစဉ်တကျထည့်ပါ။ ကိုယ်သုံးတဲ့ပိုက်ဆံကိုလည်းလေးစားမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ငွေမြဲပါလိမ့်မယ်။ (၃) ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပစ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပစ်ချထားတာမျိုး၊ တွေ့တဲ့နေရာမှာတင်ထားတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံအိတ်ထားဖို့ နေရာလေးတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသင့်ပြီး စနစ်တကျထားသင့်ပါတယ်။ (၄) … Read more
ပျောက်ဖို့ခက်တဲ့ဆားဝက်ခြံတွေကို အပြတ်ရှင်းပေးမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်း(၄)မျိုး
ပျောက်ဖို့ခက်တဲ့ဆားဝက်ခြံတွေကို အပြတ်ရှင်းပေးမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်း(၄)မျိုး မျက်နှာပေါ်မှာ ဆားဝက်ခြံတွေရှိတာက အတော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပြီး အလှလည်းပျက်ပါတယ်။ ဆားဝက်ခြံတွေရှိနေရင် သဘာဝအတိုင်းနေလို့လည်း အဆင်မပြေသလို၊ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီတော့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လုပ်ရုံနဲ့ မျက်နှာပေါ်ကဆားဝက်ခြံတွေကို အပြီးတိုင်ရှင်းလင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သံပရို၊ပျားရည်၊သကြား သံပရိုသီးကိုထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ပျားရည်အနည်းငယ်လူးပါ။ အဲ့ဒီအပေါ်ကနေ သကြားအနည်းငယ်ဖြူးပြီး ဆားဝက်ခြံတွေရှိတဲ့နေရာမှာ ငါးမိနစ်လောက်ပွတ်တိုက်ပေးပြီး မျက်နှာသစ်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ပေးရင် ဆားဝက်ခြံတွေ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (၂) သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့်၊ဂျုံမှုန့် သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့်နဲ့ဂျုံမှုန့်ကိုဆတူရောပြီး ရေနွေးအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး အနှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာမှာ ခပ်ထူထူလေးလိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပေးပြီး ရေနွေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မှန်မှန်လုပ်သွားရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (၃) အုန်းဆီ၊ကော်ဖီမှုန့် အုန်းဆီထဲကို ကော်ဖီမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာခဲထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ ကော်ဖီမှုန့်၊အုန်းဆီ အခဲလေးနဲ့ ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာကို … Read more
အိမ်မပိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင်
အိမ်မပိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင် မင်း ​ဒါ​လေး ခန​လောက်​ နား​ထောင်​ကြည်​့လိုက်ပါအုးံ …၊ချစ်​သူဖြစ်​ပီး 1 လ​လောက်​က အရမ်​းကို​ အေးတိ​အေးဆက်​ နိုင်​လွန်​းတဲ့ ဂျိုသားမ​လေး​တွေ​ပေါ့အဲ့ ဒဏ်​​လေးကို မင်​းခံနိုင်​ပီလား …?တိုင်​ပင်​ရိုက်​​နေရင်​းနဲ့ အ​ဖေသို့မဟုတ်​ အ​မေ​ခေါ်လို့ နုတ်​မဆက်​ပဲ လိုင်​း​ပေါ်က ဆင်​းသွာရင်​ မင်​းစိတ်​ထဲ ​ပေါက်​ကွဲသံစဉ်​​တွေ ထွက်​လာမှာ အ​သေချာပဲ အဲ့ဒါ​လေး​ရော သည်​းခံနိုင်​ပီလား …? အရမ်​းလွမ်​းလို့ ကိုက ဖုန်​း​ခေါ်ရင်​​တောင်​ အ​ဖေ​မေ ရှိလို့ မကိုင်​ရဲတဲ့ အခိုက်​တန်​့ အိမ်​မပိုင်​တဲ့ ဂျိုသားမ​လေး​တိုင်​းမှာ ရှိတယ်​ ။ ​ဖုန်​း​ပြော ရပြီဆိုလဲ မဟုတ်​တာ လုပ်​ထားသလို ခိုး​ပြောရတာ မင်​းချစ် ​နိုင်​တာ ​သေချ ာတယ်​​ပေါ့ ။ သူများ အတွဲ​တွေ လူသိရှင်​ကြား Anniversary ​တွေလုပ်​လို့ … Read more
ခဏခဏ မေ့တတ်နေရင် ဒီနည်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ခဏခဏ မေ့တတ်နေရင် ဒီနည်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ ငယ်ငယ်ကလောက် ဉာဏ်မကောင်းတော့ဘဲ မေ့တတ်လာတယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဦးနှောက်ကလည်း ဓားလိုပဲ သွေးလေ ထွက်လေဆိုတာကို အကုန်သိပြီးကြမှာပါ။ ဒီတော့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ကောင်းဖို့အတွက် ဦးနှောက်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ လုပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းအချို့ကတော့ (၁) တရားထိုင်ပါ တရားထိုင်တာက စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံတွေကို အနားပေးခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ကို ပိုတည်ငြိမ်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုအားတွေ ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြင့်စေတာမို့ ပုံမှန်လေး ထိုင်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ (၂) စာအုပ်မှာ ရေးမှတ်ပါ နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ်ဆိုတာ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်မလား။ အဲ့သည့်နည်းကလည်း တကယ်အသုံးဝင်တယ်နော်။ လွယ်လွယ်မှတ်လိုက် မေ့လိုက် ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကို လျော့သွားစေချင်ရင် မှတ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ … Read more
Telegram သုံးတဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာများ Telegram ဟာ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Facebook Messenger နဲ့ Viber အစား လူသုံးများလာတဲ့ Messaging App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Group Chat ပိုင်းမှာ Function စုံလင်တဲ့အပြင် လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလည်း တခြားသောMessaging App တွေထက် စိတ်ချရတဲ့အတွက် လူတိုင်းနီးပါးအသုံးပြုသင့်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Telegram ကို အသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင် ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ပိုင်း လုံးဝလုံခြုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Telegram ဟာ Default အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Location ၊ ဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင်Conversation တွေကိုပါ ကြားဖြတ်သိရှိနိုင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခု Article မှာတော့ Telegram … Read more
အသည်းရောင်အသားဝါပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့် မြန်မာဆေးနည်းကောင်းများ အသည်းရောင်တာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ၊ ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာရှုထောင့်က သုံးသပ်တဲ့အခါ ၁ – ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါ ၊ ၂ – နာတာရှည် တငွေ့ငွေ့ တအိအိ နဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါတို့ပဲပေါ့ ။ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတဲ့ အသည်းရောဂါ သူက အစာမချေ ၊ အစာမကြေရာက စပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အသက် ( ၅ ) နှစ် ကနေ( ၁၄ ) နှစ်ကြား ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ် ။ ဖြစ်ချိန်မှာတော့ တော်တော်အခံရခက်ပါတယ် ၊ ပြင်းထန်တယ် ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ကုလိုက်ရင် ၁ – လွယ်လင့်တကူ ပျောက်ကင်းသွားမယ်။ ၂– ကျေနပ်စရာ ကောင်းတာက … Read more
June 1, 2021 June 1, 2021 by ApannPyay Media
ရသေ့ကြီးဦးခန္တီ၏ ရောင်းအား ဝယ်အား တိုးစေသော အစီအရင် ရသေ့ကြီးဦးခန္တီ၏ ရောင်းအား ဝယ်အား တိုးစေသောအစီအရင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများမှာ သံပုရာသီးအစစ်တစ်လုံး ဖယောင်းတိုင်အလယ်အလတ်(၁)ချောင်း မီးခြစ် ကြွေပန်းကန်တစ်ချပ် ခဲတံ တို့လိုပါတယ် ပထမဆုံးခဲတံတစ်ချောင်းဖြင့်ဖယောင်းတိုင်အောက်ခြေကနေ မိမိဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကို ရောင်းအားဝယ်အားတတ်စေ အောက်ခြေကနေအထက်သို့ ရေးပါပုံပါအတိုင်းသံပုရာသီးအပေါ် ဖယောင်းတိုင်ကိုစိုက်ပြီးမီးထွန်းညှိပါ အောက်က ကြွေပန်းကန်တစ်ချပ်ခံပါ ပြီးရင် မိမိပြုလုပ်နေကြအတိုင်း ဘုရားရှိခိုးပြီး အောက်ပါ ဂါထာအားတတ်နိုင်သမျှ ရွတ်ဆိုပေးပါ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီပေးသော (ဓနသိဒ္ဓိဂါထာအရဟံ ဗဟိအန်တဇယံသုဂတံ အ မိတံ ဝိရဇံ လလိတံအတုလံ စရဏံ တိဘဝူပ သမံ ယမကံသုခဒံ သရဏံ ပဏာမာမိ ဇိနံ) တတ်နိုင်သမျှ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါ ဖယောင်းတိုင် မကုန်ခင် မီးငြိမ်းလိုက်ပါ သံပုရာသီးကို ဘုရားမှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ပြီး အဆင်ပြေနေသော … Read more
ပန်းအိုး ထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ မနွမ်းခြောက်အောင် ကြာကြာခံနေ စေမယ့်နည်း
ပန်းအိုး ထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ မနွမ်းခြောက်အောင် ကြာကြာခံနေ စေမယ့်နည်း ပန်းအိုး ထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ မနွမ်းခြောက်အောင် ကြာကြာခံနေ စေမယ့် နည်းလမ်းများ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေကို ကြာကြာခံနေ စေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိ ပါ တယ် ။ အလုပ်စားပွဲမှာ အလှပန်းအိုး ထိုးတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် ၊ သင့်အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ အလှဆင်တာမျိုးနဲ့ ဘုရားမှာ ပန်းအိုးထိုးပြီး ပန်းကပ် ပူဇော်တဲ့အခါ ပန်းတွေ ခဏ လေးနဲ့ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ သွားတတ်လို့ စိတ် အ နှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် ။ အခုဖော်ပြ ပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေက တော့ ပန်းအိုး ထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ ကြာကြာခံနေ စေမယ့် နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ် ပါ … Read more
ဘုရားရှိိခိုးရသော အကျိုး(၁၇)ပါး ၁။ သူတစ်ပါးတိို ့ရှိခိုးခံထိုက်ခြင်း။ ၂။ စိိတ်၏ ရဲရင့််တည်ကြည်ခြင်း။ ၃။ သေသည်၏အခြားမဲ့၌သုဂတိိဘဝကိုရခြင်း။ ၄။ နောင်ဘုရားနှင့်တွွေ သည့်အခါသစ္စာလေးပါးကိုသိလွယ်ခြင်း။ ၅။ အမျိုးမြတ်ခြင်း။ ၆။ သူတစ်ပါးတို့၏အရိုိအသေအပြုကိုခံရခြင်း။ ၇။ ချီးမွမ်းထိိုက်သောကိုိယ်အဂါင်္နှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၈။ အဆင်းလှခြင်း။ ၉။ ကိုိယ်အနံ ့မွှေးခြင်း။ ၁၀။ ခံတွွင်းအနံ ့မွှေးခြင်း။ ၁၁။ ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့််ပြည့်စုံခြင်း။ ၁၂။ နက်နဲသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၁၃။ ထက်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၁၄။ လျင်မြန်သောဉာဏ်ပညာနှင့််ပြည့်စုံရခြင်း။ ၁၅။ ရွှင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံရခြင်း။ ၁၆။ ဆန်းကြယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံရခြင်း။ ၁၇။ စကားကောင်းကိိုဆိုနိုင်ခြင်း။တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမြေ့ကြပါစေ ခရစ်ဒစ်် ဘုရားရွိိခိုးရေသာ အက်ိဳး(၁၇)ပါး ၁။ သူတစ္ပါးတိုိ ့ရွိခိုးခံထိုက္ျခင္း။ ၂။ စိိတ္၏ ရဲရင့္္တည္ၾကည္ျခင္း။ ၃။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌သုဂတိိဘ၀ကိုရျခင္း။ ၄။ ေနာင္ဘုရားႏွင့္ေတြြ … Read more
ဒီလိုမီးရောင်လေးတွေ လင်းနေခဲ့ရင် သတိထားပါ။
ဒီလိုမီးရောင်လေးတွေ လင်းနေခဲ့ရင် သတိထားပါ။ IOS deviceတွေမှာ Indicator Lightက လိမ္မော်ရောင်(သို့) အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဘာလို့သတိထားသင့်လဲ❓ သင့်Iphoneရဲ့ Screenထောင့်လေးမှာရှိတဲ့ မီးလုံးလေးကလင်းနေခဲ့ရင် ဘာလို့သတိထားသင့်လဲဆိုတော့ သင့်ဖုန်းကို Appတစ်ခု ကနေပြီးTrackလုပ်နေတာမျိူးဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ဒီFeaturesကို IOS 14နဲ့ နောက်ပိုင်း Versionတင်ထားတဲ့ deviceတွေမှာ အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ပြီး App Tracking စနစ်ကို အဓိကကာကွယ်ပေးမယ့် Featuresတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်Iphoneက IOS 14နဲ့ နောက်ပိုင်း versionတစ်ခုခုကိုတင်ထားတယ်ဆိုရင် Indicator lightက – – မီးအစိမ်း ဘာလို့လင်းနေရလဲ ? – လိမ္မော်ရောင်မီးက ဘာလို့လင်းနေရလဲ ? ဆိုတော့ – သင့်ဖုန်းမှာ microphoneကို Appတစ်ခုကအသုံးပြုနေတဲ့အခါ Indicator lightက လိမ္မော်ရောင်မီးလေးလင်းပါတယ်။ – အကယ်၍သင်က … Read more
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်သင့်တဲ့ အန္တာရာယ်များတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း ၈ ခု